निगरानी सरकारी सम्पत्तिमाथि : भाग - ३१
काठमाडाैं | असार ११, २०७६
काठमाडौं –काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सरकारी धारामा खानेपानी आउँदैन । नागरिकहरू ट्याङ्कर वा जारको पानी किनेर जीविका चलाउन बाध्य छन् ।
पानीको समस्या राजधानी शहरमा नौलो होइन । दशकौंदेखि उपत्यकावासीले कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । पानी आउने ठाउँमा पनि दैनिक आउँदैन । पानी आउने भनिएका कतिपय स्थानमा त महिनामा २/३ पटक मात्र पनि आउने गरेको पाइन्छ ।
नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने तालुकवाला निकाय हो, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ।
राजधानीमा माग अनुसार पानीको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । ठूलो स्रोतको नै अभाव छ । मेलम्चीको पानी आउने भाका पनि सरेकोसर्‍यै छ ।
आवश्यकता अनुसार पानीको स्रोत नभए पनि, नागरिकको धारामा पानी नपुगे पनि केयूकेएलमा भने टन्नै कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई सबै सुविधा छ, गाडी र इन्धनसहित ।
केयूकेएलमा कूल १६४ वटा सवारी साधन छन् । त्यसमध्ये कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या नै १३८ छ । जसमध्ये ३४ वटा गाडी र १०४ वटा मोटरसाइकल स्कूटर रहेको देखिन्छ ।
यस्तै प्राविधिक कामका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या २६ छ । जसमा १३ वटा ट्यांकर, ४ वटा क्रेन, ४ वटा जेटिङ, ३ जेट गाडी र एक–एकवटा जेसिभी र भिडियो गाडी छन् ।
महाप्रबन्धकलाई स्कोर्पियो, मुख्य कार्यालयमा ११ जनालाई गाडी
केयूकेएलका महाप्रबन्धक डा. महेशप्रसाद भट्टराई बा १७ च २७५८ नम्बरको स्कोर्पियो गाडी चढ्छन् ।
उ.का.नि विजयमान श्रेष्ठ, का.मु. उ.का.नि मुमानसिंह कार्की, प्रबन्धक विजय तिमिल्सिना, कामु प्रबन्धक सतिशकुमार दत्त, उपप्रबन्धकहरू सुन्दरबाबु अर्याल, लक्ष्मण बस्नेत, प्रकाशकुमार राई र रवीन्द्र पोखरेल तथा सहायक प्रबन्धकद्वय योगेन्द्रबहादुर बम र उज्ज्वल श्रेष्ठले चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएको देखिन्छ ।
सहायक प्रबन्धकहरू समेतले गाडी सुविधा पाइरहेको अवस्थामा एक उपप्रबन्धकले भने मोटरसाइकल चढ्ने गरेको देखिन्छ । उपप्रबन्धक रविकुमार राईलाई केयूकेएलले मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।
यसका अलाबा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूले पनि सवारी सुविधा पाउने गरेको देखिन्छ ।
मासिक १६० लिटर इन्धन !
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले भन्छ– ‘विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीले मासिक १०० लिटरसम्म इन्धन पाउँछन् । तर केयूकेएलमा भने सवारी सुविधा पाएका सबैले १६० लिटरसम्म इन्धन मासिक पाउने गरेका छन् ।
डिजेल प्रयोग हुने गाडीका लागि मासिक १६० लिटर र पेट्रोल प्रयोग हुने गाडीका लागि मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको केयूकेएलले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।
मोटरसाइकलका लागि भने मासिक १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ ।
सबै गाडी रातो प्लेटमा
केयूकेएलले आफ्ना सबै गाडी रातो नम्बर प्लेटमा रहेको जनाएको छ । पब्लिक कम्पनी भएकाले रातो नम्बर प्लेटमा राखिएको उसको जिकिर छ ।
एउटै गाडीको पनि मूल्य थाहा छैन ?
सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के भने केयूकेएललाई आफ्ना कुनै पनि गाडीको मूल्य थाहा छैन ।
हामीले गाडीहरूको मूल्यसहितको विवरण मागेका थियौं, तर मूल्य 'फेला पार्न नसकिएको' भनेर विवरण उपलब्ध गराएको छ ।
हेर्नुहोस्, केयूकेएलमा रहेका सवारी साधनहरूको विवरण :
हेर्नुहोस्, यसअघिका ३० भाग :
प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई
नवजीवन सहकारीमा नक्कली फाइलको धन्दा, एकै परिवारका ७ जनालाई डेढ करोड दिएपछि तनाव !
कैलालीको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न नक्कली फाइल बनाएर डेढ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको खुलेको छ । सहकारीकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली फाइल तयार गर्न लगाई आफ...